စာအုပ္ – Min Thayt
Articles Literature Perspective
မြန်မာပြည်တိုးတက်ရေးအတွက်၊ ယောင်ဝါးတွေအလိုမရှိဘူး။ ဘယ်အဆင့်လဲ… • မနောကံအဆင့်လား • ဝစီကံ အဆင့်ပဲလား • ကာယကံမြောက် အဆင့်ထိရောက်သလား…. မြန်မာပြည်ရဲ့ တိုးတက်မှုက ပညာရေးနဲ့ ဆိုင်တယ်။ စာအုပ်စာပေတွေနဲ့ ဆိုင်တယ်။ စာအုပ်စာပေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ နေရာဌာနတွေ ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ တိုးတက်မှုလို့ ပြောတဲ့နေရာမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု ဆိုတာ ရှိတယ်။ အသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု ရှိတယ်။...
Min Thayt July 31, 2019 July 31, 2019
• ဖတ်ချင်သလို ဖတ်…. • ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ ဖတ်…. စာဖတ်နည်းအကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။ ကျနော့် စာသင်ခန်းထဲမှာ၊ အမြဲကြုံရတဲ့ မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်စာဖတ်နည်းက အကောင်းဆုံးလဲ ဆိုတာ…. စာကို ဘယ်လို ဖတ်ရမလဲ ဆိုတာ…. ကျနော်….၊ ရိုးရှင်းစွာ ဖြေတယ်။ ကျနော့် စာဖတ်သက်တစ်လျှောက် ကျနော် ကိုယ်တိုင် ရခဲ့တဲ့နည်းကို ပြောလိုက်တယ်။ • ဖတ်ချင်သလို...
ကျနော် စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်၊ အခြေခံ အချက် (၂) ချက်ကို ကြည့်ပြီး၊ ဝယ်ဖို့ မဝယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ နံပါတ် တစ် အချက်က၊ အကြောင်းအရာကို ကြည့်တယ်။ နံပါတ် နှစ် အချက်က၊ စာရေးသူကို ကြည့်တယ်။ ဒီနေရာမှာ၊ စာရေးဆရာ လို့ မသုံးပါဘူး။ စာအုပ်ရေးသူ တိုင်းက၊ စာရေးဆရာ မဟုတ်ကြပါဘူး။ စာရေးဆရာ...
ဒေါက်တာ သန်းထွန်းက ပြောတယ်။ အသိသစ်၊ အတွေးသစ်၊ အယူအဆသစ် မပါရင်၊ စာအုပ်သစ် မရေးနဲ့…တဲ့။ ကျနော် စာသင်ရင်၊ ကျနော် စာရေးရင်၊ ဒေါက်တာ သန်းထွန်းမူကို အမြဲလိုလို ကိုင်ပြီး ရေးတယ်။ ရံဖန်ရံခါ ရေးချင်စိတ် ပေါ်တယ်။ ဒါပေမယ့်၊ ဒါဟာ သမာရိုးကျ အမြင် ဖြစ်နေတယ်။ ရိုးလွန်းတဲ့ အချက်အလက်ဖြစ်နေ တယ်။ စာဖတ်သူအတွက်၊...